ထူးထူး (တောင်ငူ) ● အေးမြအလင်းရှင် | MoeMaKa Burmese News & Media
သိပ္ပံတွဲဘာသာရပ်မှာ – ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကို ဆရာမကသင်သလို၊ ရူပဗေဒဘာသာရပ်ကို ဆရာဦးသွင်အောင်၊ နောက် ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ကို ဆရာဦးသန်းမင်းထွဋ်ကသင်ပါတယ်။ ဆရာတွေအကုန် အသင်အပြကောင်းသလို၊ တယောက်နဲ့တယောက်သင်တဲ့ပုံစံချင်းလည်း မတူပါဘူး။
အဲ့ဒါ ဆရာလားဟင်လို့ မေးတော့မှ…. ပြုံးပြီး “အေးဟုတ်တယ်တယ်။ အဲ့ဒါငါပဲတဲ့”
ထူးထူး (တောင်ငူ) – စေတနာထားပုံ (0)
3 Responses to ထူးထူး (တောင်ငူ) ● အေးမြအလင်းရှင်
Catwoman on May 26, 2016 at 7:32 am
Sometimes you have to do well when you do good . Ifadoctor from England goes to help inadifferent country, he might save three or four lives. But let s say if he donate money for mosquito nets, he will save many lives. It is good to be helpful and nice and blah blah blah but we have to also look at what is the most significant way that we can help people.
We can all go and beadoctor atasmall village . That sasacrifice yes but you can’t save lives if there re no medicines, machines, nurses, staff , etc and that s notavery smart act. Just my thoughts.
ဖိုးထက် on May 26, 2016 at 8:42 am
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း အပြည့်ဖြစ်ရပါတယ် ဆရာ ထူးထူး
kyawtheinhtoo on May 27, 2016 at 10:49 am